Ini ndichiri kukwanisa kunyorera kuNewspaper kana ... Martech Zone
Chishanu, June 15, 2007 Mugovera, Kubvumbi 16, 2016 Douglas Karr
Vamwe venyu vanoziva nhoroondo yangu vanonzwisisa kuti ndakashanda muNewspaper Viwanda kweanopfuura makore gumi. Zvimwe zvezviitiko zvangu zvikuru zvaive muindasitiri, zvese nehunyanzvi uye nehunyanzvi. Zvinondishungurudza kuti mapepanhau ari kupera ... asi handifunge kuti rufu, kuzviuraya chaiko.
Mapepanhau akatarisa sezvo vakapatsanurwa vachifamba vachienda EBay uye Craigslist. Vanodada, ivo havana kufunga kutora mamwe emabhizimusi avo voisa mari mumaokisheni epamhepo kana mumashambadziro. Chinhu chinoshamisa pane izvi ndechekuti vakabata iro rekupedzisira kadhi - jogirafi. Dai mapepanhau awana nzira yekupinda pamhepo akapatsanurwa muchikamu chematunhu mhinduro, ndinofunga vangadai vakabatirira kunze. Izvo zvanonoka izvozvi… yega yega inobudirira online yakasarudzika system ine dunhu chinhu kune iyo.
Saka ndingaite sei kunyorera kune Pepanhau?
Dai vaparidzi vavo vakamira kudhonza matoro eAP crap, ma Editors avo vakamira kugadzirisa, ivo vakarega kurega tarenda remuno, uye ivo vakatanga kurega vatori venhau kumhanya vakasununguka. Mune mamwe mazwi - kana vakarega kupusa nezve kumisikidza 'yepazasi mutsara' uye vakashandisa tarenda ravainaro, ndinenge ndiripo kwavari.
Uchapupu? Ingoverenga Ruth Holloday's blog paunowana mukana. Ndakashanda mupepanhau remuno kwemakore mashoma, ndikaverenga bepa zuva rega rega, uye ndanga ndisingambozive Ruth. Asi kwegore rapfuura ndanga ndichiverenga bhurogu yake uye zvinondipfura. Kuvimbika kwake, kuvimbika, kusajeka, uye kuda kwakazara kuti asvike kunyaya chimwe chinhu chandisina kumboziva paakanyorera iyo Nyenyedzi. Muchokwadi, ini ndaisatomboziva kuti aive ani paNyenyedzi!
Vakachengeta sei tarenda senge iye kubva pakuputika ini handina zano ... Ini ndinogona kungofungidzira kuti zvaive zvematongerwo enyika nekugadzirisa. Ndakaverenga zvinyorwa pa IndyStar ikozvino uye mazhinji acho anoverengwa semishumo yemapurisa kana zvirevo… havana hupenyu mavari chero. Zvinonditenderedza kupenga kuti havaone izvi uye voita chimwe chinhu nezvazvo.
Ini ndaive naboss uye chipangamazano, Skip Warren, kare kare. Vakati vashandi vanogara vachikushamisa kana ukavapa mukana wekuti vabudirire. Izvi hazvina kusiyana nemapepanhau. Monster makambani, zvematongerwo enyika, uye epakati manejimendi vaparadza pepanhau. Blog raRute richaenderera mberi nekukura… uye chero munhu ane muverengi wenhau achawana ava vekare-vatori venhau votanga kuverenga mablog avo!
Ruth haana bhajeti rekushambadzira kuyedza kumuchengeta ari pamusoro sezvinoita Nyeredzi, asi hapana kunetseka - ndinofunga saiti yeNyeredzi ichauraya zvakakwana tarenda rayo remukati iro rinozomanikidza vanhu kune mamwe masosi anodzidzisa saRuth! Ini ndanzwa kubva kune vekunze kuti nzvimbo dzekukura mune iyo saiti yeNyeredzi dzakanyatso tarisa kutenderedza mushandisi-inogadzirwa zvemukati, niche (yemuno) nhau, uye blogging. Huh! Fungidzira izvozvo!
Tags: indianapolis nyeredziindy nyeredzipepanhau
Vazhinji vanondidaidza kuti Doug, nhasi vanga vari Baba
Jun 15, 2007 pa10: 56AM
Unoziva Doug, ndinowanzo kanganwa kuti vanhu vachiri kuverenga mapepanhau. Ini ndoziva izvo zvinonzwika kusanzwisisika, asi zvave zvakareba zvakadaro kubvira ini, kuti fomati yangu yekureva yachinja.
Kana vanhu ivavo vekutengesa vachiuya pamba nemba vachitengesa kunyoreswa, ndinoziva kuti ndinogara ndichiguma ndichitarisa sekunge vakabvunza kana ndaida kutenga bhata rechando chebhokisi rangu rechando kana imwe peturu peturu yengoro yangu isina bhiza.
Iko kutarisa kunoti "… Chaizvoizvo ... vanhu vachiri kuita izvo?" 🙂
Jun 15, 2007 pa 12: 25 PM
Ndinoziva zvaunoreva, Tony. Google Feedreader yakatsiva zvachose kunyorera kwangu kwepepanhau. Ndichiri kuverenga mamwe magazini… pamwe pakatama tarenda. Uye ndiri nzungu yebhuku. Ini ndinofunga munhuwi uye kunzwa kwepepa zvichiri zvakasikwa kwandiri.
Chandinonyanya kusuwa ndiyo tarenda, hazvo… ndizvo zvandaive ndichiedza kutaura. Ndinovimba kuti vatapi venhau vanotendeukira kublogging zvakanyanya uye nekuwedzera (kunze kwemapepanhau avanoshandira). Muchokwadi, ndingafarire kuwona 'anotsigirwa' mablogging masayiti ane vatapi venhau chaivo vasina miganhu kwavanogona kutora kunyora kwavo.